Ururada Macalimiinta iyo Gudiga adeega Macaliminta oo kulan ka yeelan doona arrinta mushaar kor dhinta bisha Soo socota – The Voice of Northeastern Kenya
Ururada Macalimiinta iyo Gudiga adeega Macaliminta oo kulan ka yeelan doona arrinta mushaar kor dhinta bisha Soo socota
Gudiga u qaabilsan adeega macalimiinta ayaa shalay yeeshay kulan ay ku gorfeynaayen xiliga la qaban karo shir looga arinsanayo mushaar kor dhinta ay macalimiinta dalbanaayan.
Kulankan shalay dhexmaray TSC iyo ururka ay ku bahooben macaliminta dugsiyada sare ee KUPPET oo ay ka soo qeyb galeen mas’uuliyiinta labada dhinac ayaa waxa uu ka dhacay xarunta dhexe ee TSC ee Magalada tan Nairobi.
Omboko Milemba oo ah gudoomiyaha ururka Macalimiinta ee KUPPET ayaa sheegay in kulankaasi ay ku heshiiyen in shir kale oo looga hadlayo mushar kordhinta macalimiinta la qabto 4-ta bisha October ee sanadkan.
Kulanka shalay oo jimco ahayd dhacay oo socday muddo dhan laba sacadood iyo 30 daqiiqo ayaa waxa uu Mr Milembe sheegay in hormar weyn ay ka filayaan wada xaajodka ay la yeelanaayan gudiga dowlada ka socda ee u qaabilsan arrimaha macalimiinta.
Kooxdan labada dhinac ah ka kala socday oo min shanta xubnood ahaa ayaa la filaayay in ay wada xaajodka si rasmi ah u bilaaban 4-ta bisha soo socoto si xal loogu helo cabashada ay qabaan barayaasha oo la xiriirta mushaar kordhintooda.
Barayaasha ayaa doonaya in ay helaan lacag kor dhin dhan 300 boqolkiiba taas oo hadii lagu heshiiyo lagu wado in ay bilaabato bisha July ee sanadka 2021.
Macalimiinta dalka ayaa marar badan sameeyay shaqo joojin saameyn xun ku yeelatay waxbarashada guud ahaan dalka taas oo ay uga cabanaayen in loo sameeyo mushaar kor dhin dhan 300 boqolkiiba.
← Hooyo cunugeeda dishay oo maxkamada la soo taagay
ODM iyo Jubilee oo maalinta berito ah isu soo baxyo ku dhigi doono Magalada tan Nairobi →